Qaar badan oo naga mid ah nidaamka tirinta rakaabka waa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ku saabsannidaamka tirinta rakaabka.
HPC088 nidaamka tirinta rakaabka waa sax-sare (98% +) badeecada tirinta rakaabka loogu talagalay tirinta otomaatiga ah ee rakaabka baska iyadoo lagu saleynayo tikniyoolajiyadda aragtida muuqaalka indhaha iyo tiknoolajiyada falanqaynta muuqaalka leh. Kaamirada binocular eenidaamka tirinta rakaabka loogu talagalay naqshad injineernimada u eg-bini-aadamka waxay ururinaysaa macluumaadka dhabta ah ee dhaqdhaqaaqa rakaabka ee albaabka kala duwan, waxayna si deg deg ah u xisaabisaa xogta 3D ee rakaabka bartilmaameedka iyada oo loo marayo mashiinka sawirada, oo ay ku jiraan dhererka rakaabka bartilmaameedka \_ ballaca garabka, iwm, oo aan u dhigmin sifooyinka bini'aadanka Shaandhaynta otomaatiga ah ee walxaha bartilmaameedka ah (sida taraleyda, alaabada, iwm.) waxay ku guuleysan karaan isla ogaanshaha saxda ah iyadoo aan loo eegin qorraxda ama jawiga yaraanta.
HPC088 nidaamka tirinta rakaabka wuxuu leeyahay RS232, RS485, laba nooc oo xog isdhaafsi ah, waa mid aad ugu habboon in lala dhexgalo nidaamyada dhinac saddexaad si loo xaqiijiyo isdhexgalka xogta.
Kaamirada binocular ee nidaamka tirinta rakaabka waxay qaadataa naqshadaynta injineernimada indhaha aadanaha, oo lagu dhisay laba kamaradood oo CCD ah si ay u ururiso sawirrada 3D ee bartilmaameedka, ayna u ururiso durdurrada fiidiyowga ee waqtiga dhabta ah xawaare dhan 25 wareeg halkii labaad. Thenidaamka tirinta rakaabkawuxuu leeyahay howl ka hortagga ruxista oo aad ugu habboon in lagu isticmaalo jawiga baska. Si toos ah ayey u shidi kartaa iyadoo loo eegayo deegaanka Xoogga iftiinka dheeraadka ee infrared-ka waxaa caadi ahaan loo isticmaali karaa inta lagu jiro maalinta ama habeenkii.
Sawirka mashiinka nidaamka tirinta rakaabka wuxuu leeyahay qaab-dhismeed waxqabad sare leh oo u heellan processor DSP, kaas oo ka baaraandegaya macluumaadka fiidiyowga fiidiyowga ee labada kamaradood ee 'binocular' waqtiga dhabta ah iyadoo la raacayo algorithm garaafyada horay loo sii dejiyay, wuxuu xisaabiyaa tirada waqtiga dhabta ah ee rakaabka labada albaab ee baska, oo kulaxidhiidha qaybta saddexaad iyada oo loo marayo isdhaafsiga RS232 iyo RS485 Nidaamku wuxuu sameeyaa isdhaafsiga xogta.
Mashiinka wax sawirayaa waa lagu dhisi karaa moduleka GGM (ikhtiyaar), kaas oo xaqiijin kara meelaynta GPS ee basaska iyo gudbinta xogta shabakadda 3G \_ 4G, sidaa darteed nidaamka tirinta rakaabka sameysan kara xog ururin dhameystiran, gudbinta xogta, howlaha meeleynta gaariga, iyo dalabsiinta deg deg ah.
The nidaamka tirinta rakaabka processor ayaa lagu rakibay meesha qarsoon ee saqafka baska. Haddii moduleka GGM la isticmaalo, anteenada GPS \_ GPRS waa in la dhigaa meel ay astaantu si wanaagsan u heshay.
Fiidiyowga tooska ah ee rakaabka MRB
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah nidaamka tirinta rakaabka, 2D, 3D, AI nidaamka tirinta rakaabka, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon nidaamka tirinta rakaabka adiga 24 saac gudahood.
Hore: MRB miiska rakaabka otomaatigga ah ee baska HPC168
Xiga: MRB Mobile DVR gaariga
Counter Rakaabka otomaatiga ah
Gawaarida Dabagalka Shaqada
Kaalinta Rakaabka ee Basaska
Rensor Tirinta Rakaabka